Arsenal Oo Lasoo Saxiixaneysa Weeraryahan Halis Ah, Upamecano Oo Bayern Ku Biiraya & Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa – Garsoore Sports
Asc.. maalin wanaagsan aqriste. Marnaba ma dhammaaneyso xanta suuqa kala-iibsiga cayaartooyda xitaa haddii uu suuqa xiranyahay iyadoo ay taasi dheertahay in kooxaha qaar ay heshiisyo horudhac ah lasii gaarayaan cayaartooyda si ay islamarka uu suuqa furmo ay u helaan adeeggyadooda.
Haddaba waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa maanta oo ay warbaahinadu qorayaan.
Liverpool ayaa isku diyaarineysa bixitaanka xiddiga qadka dhexe ee Netherlands Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, waxaana ay xiiseynayaan ciyaaryahanka Borussia Monchengladbach ee Jarmalka ah Florian Neuhaus, 23, si uu bedel ugu noqdo (Kicker)
Tababaraha Reds Jurgen Klopp ayaa sidoo kale u dhaqaaqi kara 26 jirka Udinese ee reer Argentina Rodrigo de Paul oo uu kula saxiixan karo heshiis 30 milyan oi ginni ah. (The Sun)
Arsenal ayaa ku dhow inay dhammeystirto heshiis xagaaga ah oo ay kula soo saxiixaneyso 18 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Sporting Lisbon ee reer Portugal Tiago Tomas qiimo jaban oo gaaraya £ 20m. (The Sun)
Bayern Munich ayaa ogolaatay inay lasoo saxiixato xiddiga diirada u saaran Liverpool iyo Chelsea Dayot Upamecano ee RB Leipzig, iyadoo daafaca reer France oo 22 jir ah uu saxiixi doono heshiis shan sano ah. (Bild)
Arsenal ayaa rumeysan inay ku qancin karaan 19-jirka dhalinta yar ee reer England Folarin Balogun inuu saxiixo qandaraas cusub.
Weeraryahankan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga. (Evening Standard)
Kooxda Jarmalka ka dhisan ee Bayer Leverkusen ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro Balogun, iyadoo ay sidoo kale xiiseynayaan Stuttgart iyo Rennes. (Mirror)
Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho ayaa u muuqda inuu sii ogyahay inuu ka ciyaari doono meel kale xilli ciyaareedka soo aadan, Manchester United ayaa lix bilood kahor dalab ay ka gudbisay laga soo diiday iyadoo ah kooxda keliya ee sida joogtada ah loola xiriirinayo cayaaryahankan. (Eurosport)
Daafaca Everton iyo xulka France Lucas Digne oo 27 jir ah ayaa ogolaaday heshiis cusub oo uu kula sii joogayo kooxda Toffees. (Sky Sports)
Kooxda Tababare la’aanta ah ee l Bournemouth waa inay tixgelisaa xiddigii hore ee Arsenal iyo France Patrick Vieira su ay ug dhigaan tababarahooda xiga, ayuu yiri saaxiibkiisii ​​hore ee Gunners Martin Keown. (Talksport)
New York Red Bulls iyo DC United ayaa ka fiirsanaya inay ku biiraan loolanka loogu jiro saxiixa daaficii hore ee kooxda Arsenal Kieran Gibbs, oo 31 jir ah, kaasoo weli bartilmaameed u ah kooxda Inter Miami. (ESPN)
Weeraryahanka reer Spain Diego Costa, oo 32 jir ah, kaasoo ka tagay Atletico Madrid bishii December, ayaa wadahadalo kula jira kooxda reer Brazil ee Palmeiras – kooxdii uu taageeri jiray markii uu yaraa. (Sky Sports)